Caawa & Daljir iyo Maxamud Cabdi Ibrahim, Daljir Bossaso (dhegayso) – Radio Daljir
Caawa & Daljir iyo Maxamud Cabdi Ibrahim, Daljir Bossaso (dhegayso)
Agoosto 1, 2017 7:14 g 1
Kulanti wanaagsan, kuna soodhawaada barnaamijka cawaysnimo ee Caawa & Daljir. Barnaamijku wuxuu caawa idin kaga imaanaya xarunta Daljir Bossaso, waxaana idiin soojeedinaya Maxamuud Cabdi Ibrahim (MCI).
Wararka Caawa & Daljir ugu waaweyn cawaysinkan waxaa ugu horreeya:
Puntland oo 19 jirsatay
Hargeysa iyo kaniisadda diinta Katoolika oo siyaabo kala duwan looga hadlay
Dagaal beleed Marka
Kaga bogo Caawa & Daljir oo hoos ka dhegayso.
CAAWA & DALJIR 1624 Wararka 26986
Ciidanka PSF Gaalkacyo oo Gaalkacyo Dhireynaya (sawirro & dhegayso)
Raz mohamed 4 years ago
Marka hore hanbalyo dhamaan shacabka Puntland sanadguurada 19aad ee kasoo wareegtey aas aaskii Puntland.
Sida ay sheegeen labadii qof ee ka faaloodey waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabihii aan qabsoomin RUN ayay ka sheegeen. Puntland maanta meeshey joogto meel kasareysa iney joogto ayay aheyd mana ahayn in qabiil wax lagu qeybsado iyo 66 qof ay metelaad u noqdaan shacabka PL oo tiradooda lagu qiyaasey 2.7million waa wax caqliga aan geli kareyn metelaada noocaas ah oo weliba odayaal aysoo xulaan waa in laga guuraa qaabkan foosha xun.
Waxaan kaloo ku waafaqsanahey shirwac marka uu leeyahay xadka Puntland Galgala ayaad moodaa iney noqotey waayo mudo ciidamadu ma dhaafkn halkaas markaa weliba anigu waxaan ku darayaa in Galgala ay noqotey Mashruuc ay xukuumado dakhli ku raadsato waana Ayaan daro.